Shir lagu heshiisiinayo beelaha dega Hiiraan oo ka furmay Baledweyne – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Shir lagu heshiisiinayo beelaha dega Hiiraan oo ka furmay Baledweyne
1st May 2015 A warsame Af Soomaali 0
Mareeg.com: Magaalada Baledweyne ee gobolka Hiiraan waxaa maanta ka furmay shir dib-u-hishiisiin ah oo loo qeybtay beelaha dega gobolkaas, iyadoo lo diyaar garoobayo maamul ay yeeshaan Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe.
Shirka waxaa si rasmi ah u furay ku-simaha guddoomiyaha gobolka Hiiraan, Sheekh Xusseen Cismaan Cali, iyadoo uu gobolka ka maqanyahay gudoomiyaha gobolka C/fataax Xasan Afrax
Duqa Beledweyne Cumar Aadan Ibraahim [Baadiyoow] xildhibaanno, siyaasiyiin xilal kala duwan horay uga soo qabtay dowladihii dalka soo maray, aqoonyahanno waxgarad, iyo shaqsiyaad ka yimid dalka dibadiisa oo maalmihii ugu danbeeyayba ku sugnaa magaalada Beledweyne ayaana goob joogaa munaasabadda furitaanka shirkaas.
Sheekh Xuseen Cismaan Cali oo ah Ku-simaha gudoomiyaha gobolka Hiiraan oo khudbad ka jeediyay furitaanka shirka auaa in ka maamul ahaan soo dhaweynayaan shirka dib-u-hishiisiinta ah ee maanta u furmay beellaha wadda dega gobolka.
Sheekh Xuseen ayaa dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ugu baaqay in ay beelaha ku taageerto shirkaas.
”Annaga ka maamul ahaan waan soo dhaweyneynaa in ay bulshada wada-hadasho, oo laga wadda shaqeeyo dib-u-hishiisiinta, dowladdana waxaan leenahay waa in ay qaadataa doorkeeda ku aadan shirka maanta halkan ka furmay” Sheekh Xuseen.
Guddoomiyaha guddiga qaban-qaabada shirka nabadoon Axmed Cabdulle Jimcaalle oo ka hadllay kulanka ayaa sheegay in mudo dheerba lagu howlanaa qabsoomida shirka, marar badan oo horena ay jireen kulamo guud iyo kuwa gaar gaar ah oo ay lahaayeen beellaha kuwaa oo loogu gogol xaarayay shirweynaha maanta furmay.,
”Shirka maanta furmay waxaa ku dhan oo jooga inta badan beellihii deganaa gobolka, inta aan wali ka maqan, waxaan leenahay waa gogol aad wax ku leedihii ka soo qeyb-galla, ra’yigiina iyo talladiina ayaa loo baahan yahay, ma’aha shir qolo gooni ah ay qabtay waa shir reer Hiiraan oo dhan u dhaxeeya ayuu yiri” nabadoon Axmed C/dulle Jimcaale.
Shirka ayaa wajigiisa hore la sheegay in uu yahay shir dib-u-hishiisiin ah oo ay ku wadda hadllayaan beellaha, iyadoo intaa kaddibna looga gudbi doono wadda-tashi iyo dood la xiriirta mustaqbalka siyaasadeed ee gobolka Hiiraan, madaama xiligan loo guurayo nidaamka is maamul gobolleedyada ama federaaliisam-ka.
Qaar ka mid ah dad deggan Hiiraan ayaa la sheegay iney qabaan in gobolka Hiiraan oo kaligiisa noqon karo maamu goboleeda, halka qaar kalana qabaan iney wax wada dhistaan iyaga iyo gobolka Shabeellaha Dhexe.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay iney ku guda jirto qorshe maamul goboleed loogu dhisayo gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe, lamasa oga waxa kasoo bixin doona shirka maanta ka furmay Beldedweyne.
Germany increases Support to Somalia